Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Mandrahona ny famerenana amin'ny indostria ny fanakanana ny volan'ny zotram-piaramanidina
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Manodidina ny $ 963 tapitrisa ny volan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voasakana tsy hampodiana azy ireo any amin'ny firenena 20 eo ho eo.
Manakana ny fidiram-bola an'habakabaka $ 1 lavitrisa tsy ho tafaverina an-tanindrazana ny governemanta.
Ny zotram-piaramanidina dia tsy afaka manome fifandraisana azo antoka raha toa ka tsy afaka miantehitra amin'ny vola miditra eo an-toerana.
Zava-dehibe ho an'ny governemanta rehetra ny mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fanomezana antoka fa azo averina amin'ny laoniny tsara ny vola.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia nanentana ny governemanta hanaraka ny fifanarahana iraisampirenena sy ny adidy amin'ny fifanekena hahafahan'ny kaompaniam-pitaterana hiverina an-tanindrazana efa ho $ 1 lavitrisa ny vola voasakana amin'ny fivarotana tapakila, habakabaka ary ny hetsika hafa.
“Sakanan'ny governemanta ny fidiram-bola an'habakabaka $ 1 lavitrisa $ tsy hampodiana an-tanindrazana. Manohitra ny fivoriambe iraisam-pirenena izany ary mety hampiadana ny famerenana ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany amin'ireo tsena voakasik'izany satria miady mafy ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ho afaka amin'ny krizy COVID-19. Tsy afaka manome fifandraisana azo itokisana ny seranam-piaramanidina raha toa ka tsy afaka miantehitra amin'ny vola miditra eo an-toerana hanohanana ny hetsika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny hametrahan'ny governemanta rehetra laharam-pahamehana ny famerenana amin'ny laoniny ny vola amin'ny fomba mahomby. Tsy fotoana tokony hanomezana tanjona 'tanjona manokana' amin'ny alàlan'ny fametrahana loza amin'ny fifandraisan'ny rivotra iainana, ”hoy izy Willie Walsh, IatăTale jeneraly.
Manodidina ny $ 963 tapitrisa ny volan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voasakana tsy hampodiana azy ireo any amin'ny firenena 20 eo ho eo. Firenena efatra: Bangladesh (146.1 tapitrisa dolara), Libanona (175.5 tapitrisa dolara), Nizeria (143.8 tapitrisa dolara), ary Zimbabwe (142.7 tapitrisa dolara), dia mitentina 60% amin'ity totalna ity, na dia nisy aza ny fandrosoana tsara tamin'ny fampihenana ny vola voasakana ao Bangladesh ary Zimbabwe tara.
“Manentana ny governemanta izahay hiara-hiasa amin'ny indostria hamahana ireo olana manakana ny zotram-piaramanidina tsy hamerina amin'ny laoniny ny vola. Izany dia ahafahan'ny fiaramanidina manome ny fifandraisana ilaina mba hitohizan'ny asa sy hanome tanjaka ny toekarena rehefa tafarina amin'ny COVID-19, "hoy i Walsh.